Masuul ka tirsan maamulka Puntland oo ku dhintay shil – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Masuul ka tirsan maamulka Puntland oo ku dhintay shil
Mareeg.com: Mas’uulkii labaad ee ka tirsan maamulka Puntland ayaa maanta muddo 24 saaac gudahood ah ku geeriyooday shil gaari.
Cabdi Cismaan Faarax Ciiro gudoomiye xigeenkii hore ee degmada Gaalkacyo hadana ahaa xubin kamida Golaha deeganka degmada Gaalkacyo ayaa waxaa uu ku dhintay shil gaari oo ka dhacay laanta dusmada oo u dhaxay deegaanka cagaaran & Gaakacyo
Maydka Marxuumka ayaa waxaa la geeyay isbitaalka Xayaat ee magaalada Gaalkacyo. Gudoomiye ku xigeenka degmadda Gaalkacyo, Yacquub Maxamed Cabdalla ayaa xaqiijiyey geerida Marxuum Cabdi Cirro.
Shalay galab gaabkii ayaa shil labo gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa Burtinle iyo Garowe waxaa ku dhintay ilaa 8 ruux oo uu ka mid ahaa Cabdishakuur Maxamed Guray oo soo noqday Agaasimihii Hay’adda Daryeelka Bulshada, agaasimihii xafiiska xilligii uu Ra’iisul wasaaraha ahaa Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Dhinaca kale Cabdishakuur Maxamud Gurey ayaa madaxwaynaha Puntalanad C/weli Gaas waxa uu u magacabay Agaasimaha Hay’adda Maalgashiga iyo Horumarinta Puntland oo Khamiistii la soo dhaafey laga ansaxiyey golaha Wasiirada Puntland.
Sidoo kale, waxaa shilkaas ku geeriyooday wadaad la oran jiray Sheekh Maxamed Cabdi Qorane iyo 6 qof oo kale, kuwaasoo la sheegay iney ka tageen koonfurta Soomaaliya, oo kusii jeeday Boosaaso.
Bashiir Goobe oo xubin ka noqday baarlamanka Soomaaliya